पीसीआर रिपोर्ट बोकेर विदेश जाँदै हुनुहुन्छ? होसियार ! विमानस्थलबाटै फर्किनु पर्ला… – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/पीसीआर रिपोर्ट बोकेर विदेश जाँदै हुनुहुन्छ? होसियार ! विमानस्थलबाटै फर्किनु पर्ला…
तर उहाँलाई एयर अरेबियाले आफ्नो जहाजमा लान मानेन । आफूले सूचिकृत गरेको प्रयोगशालाको रिपोर्ट नभएको भन्दै जमानलाई विमानस्थलबाटै एयर अरेबियाले फिर्ता पठाएको हो ।
मित्रनगरस्थित एक गेस्ट हाउसमा बसिरहेका जमान अन्योलमा परेका छन् । उहाँलाई यूइर्ए पुग्नुपर्ने छ । उहाँले फर्किनका लागि पुन एयर अरेबियाले तोकेकै ठाउँमा परीसीआर गर्नु पर्ने भएको छ र उता टिकट काटेको पैसा उसै खर्च भएको छ । अब अर्काे दिन जानका लागि अर्कै टिकट का’ट्नु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ । मत साह्रै अन्यायमा परेँ कहाँ गएर कसलाई भनेर न्याय पाइन्छ ? हाम्रो कुरा कसैले सुन्दैन गुरुङ दु’खेसो पोख्नुहुन्छ।
चीनले नेपाल सिध्या,उने भयो, नेपाल जो,गाउन भारतलाइ गरिन यस्तो अ,नुरोध